HomeArimaha BulshadaMaxaa nuuriya ama iftiinsha Qalbiga?
Markaan ka hadalno iftiin waxaa ka horeeya nolol hadaba maxaa nooleeya qalbiga?
《Qalbiga waxa nooleeya diinta Islamka.》
( وﻛَﺬَٰﻟِﻚَ ﺃَﻭْﺣَﻴْﻨَﺎٓ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﺭُﻭﺣًﺎ ﻣِّﻦْ ﺃَﻣْﺮِﻧَﺎ ۚ )
Saasaannu kuugu waxyoonay Nolol Amarkanaga ah (quraanka).
Surah al cimran aayada 19aad waxa uu noogu sheegay Allah (s.w) in diinta Islamka tahah mida xaqa ah.
( ﺇِﻥَّ ﺍﻟﺪِّﻳﻦَ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﺈِﺳْﻼﻡُ )
Diintuna (xaqa ah) Eebe aktiisa waa Islaamka.
Sida Allah (s.w) ku yiri 4:170
( ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻗَﺪْ ﺟَﺎﺀﻛُﻢُ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻣِﻦ ﺭَّﺑِّﻜُﻢْ ﻓَﺂﻣِﻨُﻮﺍْ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻟَّﻜُﻢْ ﻭَﺇِﻥ ﺗَﻜْﻔُﺮُﻭﺍْ ﻓَﺈِﻥَّ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﺍﻷَﺭْﺽِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ ).
Dadow wuxuu idiinla yimid Rasuulka Xaqa Xagga Eebe ee Rumeeya (xaqa) saasaa idiin khayr roon, Hadaad gaalowdaanna Eebe waxaa u Sugnaaday waxa ku sugan Samaawaadka iyo Dhulka Eebana waa oge falsan.
Qofkii la yimaadaa Diinta Islaamka mid aan ahayn waxa uu ku sugan yahay baadi cad.
Qofka bini aadamka marka uu diin haysan waxa uu lamid yahay wax aan jirin ama xayawaan Mana garanaayo waxa uu u noolyahay iyo meesha ay noolashiisa u socoto sida hindida kuwooda dabka caabudo.
Qofka haysta diin balse ahayn tan saxda ah (xaqa ah) sida qofka haysta diinta Cristian ka ee ah diinta nabu Ciise (c.s) waxa uu lamid yahay qof dhunsan oo ka habaabay wadadi noolashiisa.
Sida aan la socono diinta (caqiidada) waa asaaska jiritaanka noolasheena.
Shey walba oo noolasha ka mid ah waxa uu hoos imaadaa diinta.
Hadii aad hesho caqiido dhab ah waa tan Islaamkee waxa aad heyshay furaha noolashaada.
Maxaa Nuuriya ama iftiinsha Qalbiga ?
Qalbiga waxaa iftiinsha Quraanka Kariimka oo ah hadalka Allah (s.w).
Quraanka Kariimka waa nuur (iftiin) sida uu Allah (s.w) ku yiri Qur’an ka Kariimka Suurada 4aad Aayada 174aad .
( ﻳَٰٓﺄَﻳُّﻬَﺎ ﭐﻟﻨَّﺎﺱُ ﻗَﺪْ ﺟَﺎٓﺀَﻛُﻢ ﺑُﺮْﻫَٰﻦٌ ﻣِّﻦ ﺭَّﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻧﺰَﻟْﻨَﺎٓ ﺇِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻣُّﺒِﻴﻨًﺎ ).
Dadow waxaa idiin yimid Xujo Xagga Eebe ah waxaana idiin soo Dejinay Nuur Cad.
Kalaamka Alle waa Nuur , balse Nuur kaliya kuma eka ee waa daawo dhib walba oo adduunyadan kugu qabsada waad ku daaweysan kartaa hadii aad marto siyaabaha loo akristo ee ka sugnaaday Nabigeena (S.C.W).
Quraanka waa daawo guud , Daawo kor ahaan iyo mida gudaha qoha qofka bini aadamka ah.
Waxyaalaha uu daaweeyo Kalaamka Alle2
waxaa ka mid ah Cudurada Qalbiga ku dhaca sida:
♡ Murugada iyo Walaaca
♡ Xiqdiga iyo Xaasidnimada
♡ Qalbi madoobaadka
♡ iyo cudaro badan oo lamid ah kuwa aan soo xusnay.
Hadii aad la il daran tahay xanuun mudana laga daaweyn waayay Rabbigeen ayaa inoo soo dajiyay daawo dhameystiran ee isku daawey Kalaamka Alle , waxaad heleesa farxad iyo caafimaad taam ah insha allah.
Allah (s.w) waxa uu inoogu sheegay suurada 10aad ee Quraanka ka mid ah aayada 57aad.
( ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻗَﺪْ ﺟَﺎﺀَﺗْﻜُﻢ ﻣَّﻮْﻋِﻈَﺔٌ ﻣِّﻦ ﺭَّﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻟِّﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ ﻭَﻫُﺪًﻯ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ).
Dadow waxaa idiin timid waano Eebihiin, iyo Caafimaadka waxa laabta ku sugan iyo Hanuun iyo Naxariista Mu’miniinta.
Eebe ayaa iska leh xukunka cirka iyo dhulka Asaga ayaana wax nooleeya waxna dila Asaga ayaana keena Xanuun iyo Caafimaad labada.
Dadka waxaa soo gaadhay waano xagga Eebe ka timi iyo Caafiyaha waxa laabta ku sugan oo ah Quraanka Kariimka.
Waa inaan ku faraxnaa Fadliga Eebe iyo Naxariista iyo Hanuunka inooga yimi Xagga Eebe.
Ugu dambeyn waxaa kusoo gaba gabayneynaa Alle ka cabsi oo ah in lagu dhaqmo diinta islaamka lana raaco kalaamka Alle iyo Sunnada Nabigeena Maxamed (s.c.w).
Hadii aad dooneyso Nolol wanaagsan iyo Qalbi dagan oo haysta iftiin iyo waliba farxad buuxda ku dhaqan oo raaca diinteena wanaagsan (Islaamka).
Allah (s.w) waxa uu ku yiri Suurad 20aad aayada 123:
( ﻓَﻤَﻦِ ﺍﺗَّﺒَﻊَ ﻫُﺪَﺍﻱَ ﻓَﻠَﺎ ﻳَﻀِﻞُّ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺸْﻘَﻰ )
Ruuxii raaca hanuunkeyga ma dhumo (adduunka) mana xumaado (aakhiro).
Alle waxaan ka baryeena inuu wadada toosan ee xaqa ah nagu hanuuniyo Dambigeena dhaafo anaga iyo waalidkeena.
Xigasho: Guled Hussein AhmedLibaax.